Nandao ny Commonwealth Britanika i Gambia, Satria ‘Fitohizan’ny Fanjanahantany’ io · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2013 0:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Swahili, Italiano, Français, English
Ny Filohan'i Gambia Yahya Jammeh nikabary nandritra ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 24 Septambra 2013. Nandritra ny kabariny no nanamelohany ny fahapelahana, ka nilazany izany ho “fandrahonana lehibe indrindra manoloana ny fisian'ny olombelona”. Saripikan'ny Firenena Mikambana avy amin'i Erin Siegal. Nampiasaina noho ny fahazoan-dalana Creative Commons license BY-NC-ND 2.0.
Nanambara tamin'ny alalan'ny fahitalavi-panjakana ilay firenena kely afrikana tandrefana ao Gambia fa hiala amin'ny “Harena (Hery) Iraisan'ny Firenena maro” [Commonwealth of Nations], finamanan'ny firenena 54 izay saika zanatany fahinin'ny Ampira Britanika ny ankamaroany.
Nivoaka tamin'ny Alarobia 2 oktobra 2013 ny fanambarana nametraka fa “natsipin'ny governemanta ny maha-mpikambana azy amin'ny Commonwealth Britanika ary nanapa-kevitra fa tsy ho mpikambana velively amin'ny rafitra mampiseho ny fiitaran'ny fanjanahantany i Gambia.”
Tsy misy fanazavana fanampiny naroson'ny governemanta, fa efa ratsy ny fifandraisan'i Gambia sy ny Fanjakana Mitambatra (Angletera) tamin'ity taona 2013 ity. Tamin'ny Avrily ny Tatitra Momba ny Zon'Olombelona sy ny Demokrasia fanaovan'ny Biraon'ny Raharaham-bahiny fanaon'ny Fanjakana Mitambatra dia nitsikera fatratra ny voarakitra momba ny zon'olombelona tao amin'ny firenena nandritra ny fitondran'ny Filoha Yahya Jammeh, ka voasongadina tamin'izany ny fitazonan'olona tsy manara-dalàna, fanakatonana tsy ara-dalàna ny gazety sy fanavakafahana ny vondron'olona vitsy an'isa. Nikantsana ny setriny nataon'ny firenena tamin'ilay tatitra: “Tsy manana fahefana ara-maoraly hibaiko izay fenitra ara-maoraly mahitsy sy ny demokrasia amin'ny firenena nozanahiny fahiny eto Afrika i Angletera”.
Taorian'ny nanambaran'i Gambia ny fanapaha-keviny hanaisotra ny maha-mpikambana azy amin'ity rafitra iraisampirenena tarihin'ny Mpanjakavavy Elizabeth II ity dia mifangarohary ihany ny hevitry ny mpiserasera manerantany.
Mathew Jallow, mpanao gazety Gambiana nitsoa-ponenana, nahita ilay fihetsika ho tsara hampielezana ny “fahadalan'ny” filoha Jammeh. Jammeh, izay tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 1994, izay nahazo ny tsikera mavaivain'izao tontolo izao noho ny lalam-pamoretana ataony, misy ny voafaritry ny famonoana, fanakanana ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety sy ny fahalalaham-pitenenana, fanenjehana ny pelaka, ary ny famelezana mafy ny fisitahana ara-politika:
Ao ambadiky ny raho-mainty rehetra misy tsirim-panantenana. Doka ratsy kokoa noho ny tatitra an-gazety herintaona ny fialan'i Gambian'i Yahya Jammeh amin'ny Commonwealth. Ankehitriny voamarina ny hilazan'ny vaovao iraisampirenena sy ny vaovao any amin'ny isaky ny firenena mikambana ao amin'ny Commonwealth izay feno fisalasalana ny amin'izay takiantsika amin'izao fialantsika izao. Izao no ataon'ny mpanao didijadona hatramin'izay. Manangana ny tevana fianjeran-dry zareo ry zareo raha miezaka ny hanamafy ny lalànany ary manaka-tena ao amin'ny tontolony rava. Misaotra anao Yahya Jammeh. Na ny ezaka ataonay rehetra aza tsy afa-nanely ny fahadalanao kokoa.
Manadihady ny toe-draharaha (lahatsoratra nahazoana alalana) ny mpanao gazety Gambiana Sainey MK Marena tamin'ny fanehoany hevitra tao amin'ny Facebook:
Nahazoana lohatenin-gazety iraisampirenena ny fialan'i Gambia amin'ny Commonwealth. Ny fanontaniana misanda anapitrisany dolara dia hoe nahoana isika no miala amin'ny fikambanana amin'ny fotoana miezaka mafy ny hiditra ao amin'ity fikambanana manerantany ity ny firenena tahaka an'i Mozambik sy ny hafa. Nahazo tombontsoa tamin'ny commonwealth i Gambia tamin'ny sehatra maro tahaka ny fanabeazana/vatsim-pianarana, fanatanjahantena ary vao haingana teo ny commonwealth no nanolotra ny Vaomieram-Pirenena Misahana ny Zon'Olombelona. Ny heviTRO dia mananjò hiala amin'ny fikambanana na fiaraha-miombon'antoka rehetra i Gambia fa tokony hisy antony mazava sy marina. Tamin'ny 2003 i Zimbabwe nentin'i Mugabe no niala tamin'ny Commonwealth noho ny antony fantatry ny rehetra tsara fa raha firenena kely eto amin'ity tanibe afrikana ity kosa tokony hanana fijery sy fanao hafa.
Saingy, tahatahaky ny tsy mitovy hevitra amin'izany i Sefa-Nyarko Clement raha nanoratra tao amin'ny Facebook:
Mety ry Gambia a. Na dia tsy ekeko aza ny famonoana an-tondromolotra sy ny politika manjakatokan'i Baba Jammeh, tohanako ity fialana amin'ny Commonwealth ity. Indrindra moa fa tsy hita intsony ny ilàna ity “Harena (Hery) Iraisan'ny Firenena maro” ity.
Ao amin'ny Twitter ny mpisera Abdou ‏(@abs2ray) nitsikera ny fihetsiky ny filoha:
Tsy manohitra ny fialan'i Gambia amin'ny commonwealth aho amin'ny ankapobeny saingy mbola diso araka ny mahazatra indray i Yaya
Raha mbola mitohy adihevitra momba ny godongodona diplaomatikan'i Jammeh, mbola tsy mazava kosa hoe inona ny tombony ho azon'ity firenena mihamahantra ity amin'ny fandaozana ny Commonwealth.